နတ်မျက်စိ ဗေဒင်- MM Software 100
Demonic Eye - နတ်မျက်စိ
နတ်မျက်စိများ ရှိနေသလားလို့ အရပ်ထဲမှာ ပြောကြတာကြားဘူးကြတယ်မို့လား။ တစ်ခုခုကို ကြိုတင်ပြီး သိနေတာမျိုး ကို ပြောချင်တာ။ အခုလည်း ဒီ app ဟာ အချစ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နဲ့ ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေမှာ နတ်မျက်စိရသလို ကြိုတင်သိနိုင်ဖို့အတွက် အကူအညီပေးနိုင်မယ့် နတ်မျက်စိ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ နတ်မျက်စိ app ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ? သုံးပုံ သုံးနည်းက ခက်သလား? ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကို နတ်မျက်စိရသလို သိသွားပါလိမ့်မယ်။ နာမည်ကိုက နတ်မျက်စိပါဆိုနေမှဗျာ 😃 မယုံရင် ဒေါင်းကြည့်လိုက်ပါ။ ဖိုင်အရွယ်အစား 8mb ပဲရှိပြီး offline အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်လို့ ဖုန်းထဲမှ နတ်မျက်စိ ဆောင်ထားပြီး အချိန်မရွေး ထုတ်ကြည့်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။ အောက်က လင့်ကို နှိပ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ် အသုံးပြုနိင်ပါတယ်။
Google Play Store မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmsoftware100.myanmarfortune